Goorma ayay tahay inaad beddesho biriiga Trailer?Hal qayb oo ka mid ah Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Goorma ayay tahay inaad beddesho biriiga Trailer?
Ma jirto hal dhibic oo qeexan oo ay tahay inaad ku rakibto bareegyada cusub trailer-kaaga.
Taa baddalkeeda, makaanikada iyo kuwa soo saarayaasha biriiga waxay si isku mid ah u soo jeedinayaan la socodka doorsoomayaasha qaarkood si ay gacan uga geystaan ​​ogeysiinta xaaladda guud ee biriigaada.Doorsoomayaashan, sida culeyska trailer-kaaga, soo noqnoqoshada jiidista, masaafada la safray, dhulka jiidida iyo xitaa qaabka wadista ayaa dhamaantood saamayn doona jadwalka beddelka biriiga trailer-ka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr marxaladood oo muhiim ah oo la tixgeliyo marka la ilaalinayo tayada iyo hufnaanta barrigaaga trailer-ka - iyo sidoo kale talooyinka tooska ah ee buug-gacmeedkaaga -iyo hubinta badbaadada jiidkaaga.
1. Markay tahay 200 mayl ee biriiga gacanta lagu hagaajiyay
Waxaa lagu talinayaa in kuwa cusub, kuwa cusub ee iibka ka baxay ay arkaan biriigyadooda oo la baaray oo la hagaajiyay meel u dhow calaamadda 200-mayl.
Qiyaastii 200 mayl waa marka kabaha biriiga iyo durbaannada, laba qaybood oo udub dhexaad u ah kulanka gudaha ee biriiga, ay "fadhiisan doonaan."Kabaha iyo durbaannada sida saxda ah loo fadhiisiyey waxay la falgalaan nidaamka braking electromagnet iyo kontoroolka biriiga xudunta u ah.Si wada jir ah, qaybahan ayaa ugu dambeyntii kicinaya is jiid jiidka joojiya trailer-kaaga mar kasta oo aad hoos u dhigto barriga kursiga darawalka.
Haddii aan la helin kabo iyo durbaanno si habboon loo fadhiisin, habka bareegu wuxuu noqon doonaa mid gaabis ah, aan waxtar lahayn ama - xaalad-xaaladda ugu xun - xitaa khatar ah.
Kormeerka biriiga ee 200-mayl ka dib, biriiga trailer guud ahaan waxaa dib loo eegi karaa qiyaas ahaan hal mar sanadkii, inta lagu guda jiro kormeerida shatiga sanadlaha ah ama inta jeer ee jiidista jiidida jiididaadu u baahan tahay.
2. At 12,000 Miles
Marka lagu daro kormeerada nidaamka bireega sanadlaha ah, garabka giraangiraha waa in lagu saleeyaa qiyaas ahaan 12,000 mayl kasta.Si joogto ah loo jiido jiidooyinka safarka culus iyo kuwa shanaad ee RVs ee arka mayl badan wadada, jadwaladaasi waxay noqon karaan marar badan.
Ogsoonow, in kastoo, dufanka ama "baakaynta" xirmooyinka aysan la mid ahayn beddelka birta.Si kastaba ha ahaatee, labaduba waa hab isku mid ah in gelitaanka xadhkaha gudaha iyo dibadda ay u baahan doonaan tillaabooyin la mid ah rakibidda biriiga cusub.
3. Marka buug-gacmeedkaagu ku talinayo
Fiiri talooyinka biriiga ee lagu sheegay buug-gacmeedka mulkiilaha trailer ama uu soo saaray saaraha faaskaaga.Buuggaas waa inuu sidoo kale sharraxaa tilmaamaha guud, tallaabo-tallaabo ah ee sida loo rakibo loona beddelo qaybaha gaarka ah ee moodeelkaaga, hagaajinta fadhiga kabaha oo si habboon u xir xirahaaga.
4. Marka Brake Performance Guud ahaan uu xanuunsado
Codso caqliga saliimka ah marka ay timaaddo ilaalinta iyo bedelida bareegyada tareenka.Haddi aad aragto xadhkaha taayirrada buuqa badan, biriiga qallafsan ama kala duwanaanshiyaha cadaadiska barriga, waa waqtigii la hubin lahaa qaybaha.Haddii hagaajinta kabaha biriiga aysan weli goyn, waxaa laga yaabaa inaad sabab u tahay beddelka nidaamka.
Caliper Saab Jak Brake Caliper Caliper Semi Loaded Caliper go'an CalipersBeenka Teal Saxanadaha biriiga iyo Qiimaha Calipers